UMshana kaTimol uthi basazoqhubeka nokulwisana nabenzi bobubi | Isolezwe
UMshana kaTimol uthi basazoqhubeka nokulwisana nabenzi bobubi
Izindaba / 12 October 2017, 7:09pm / BONISWA MOHALE
APARTHEID INQUEST: Ahmed Timol was a young schoolteacher in Roodepoort, who opposed apartheid. He was arrested at a police roadblock on October 22, 1971, and was dead five days later. Picture. www.ahmedtimol.co.za
SIZOQHUBEKA nokulwela ubulungiswa kubantu ababulawa ngamaphoyisa obandlululo njengoba senzile kumalume.
Lawa ngamazwi kamshana wesishoshovu sobandlululo uMnuz Imtiaz Cajee owashonelwa ngumalume wakhe uMnuz Ahmed Timol okutholakale ukuthi wabulawa ngamaphoyisa obandlululo ngesikhathi esezitokisini zejele iJohn Voster Square eseyibizwa ngeJohnnesburgh Central, eGoli.
UCajee uthe kudala babezama ukuthola ubulungiswa ngokubulawa kukamalume wakhe kwazise baqala ngo-2002 bethinta abophiko lwezokushushiswa kwamacala omphakathi iNational Prosecuting Authority (NPA) baze babhala incwadi ngo-2005.
Uthe bayajabula ngesinqumo senkantolo futhi bazoqhubeka ukulwela ubulungiswa ukuze bonke abafelwa yizihlobo ngezikhathi zobandlululo baphole.
"Safaka icala amaphoyisa obandlululo esaphila futhi enesikhathi esanele sokuthi akhiphe ubufakazi kodwa awazange akwenze lokho. Siyajabula ukuthi sibutholile ubulungiswa ekugcineni nomalume uzophumula ngokuthula," kusho uCajee.
UMnuz Alex Mashilo okhulumela i-SACP uthe isinqumo senkantolo siqinisekisa lokho i-SACP ebikholelwa yikho ukuthi uTimol owayeyilungu layo wabulawa amaphoyisa obandlululo.
"Iqiniso selihleli obala ngoba sasivele sisho ukuthi uTimol wabulawa ngamaphoyisa obandlululo. Ababulali bakhe kufanele bajeziswe ngokulandela umthetho," kusho uMashilo.
Uthe bazoqhubeka nokweseka umndeni kaTimol ofuna kube nobulungiswa kubo bonke abagilwa bobandlululo.
UJaji Billy Mothle uthe uTimol owatholwa eseshonile ngo-1971 emuva kokuwa esiteshi sika-10 esiteshini samaphoyisa iJohn Voster Square akazange azibulale.
"UTimol akazange azibulale ngoba kusukela ngosuku aboshwa ngalo kuze kube yilolo ashona ngalo wayeshaywa ngamaphoyisa. Abukho ubufakazi obuthi wagxuma ewindini lesitokisini esingunombolo 1026. Kuyacaca ukuthi waphushwa noma wakhishwa ngophahla lwaseJohn Voster. Akazange azibulale kodwa kuyacaca ukuthi wabulawa," kusho uMothle.
Uthe amaphoyisa obandlululo azamile ukufihla ubugebengu bawo ngokuthi abhale ukuthi uTimol washona.
UMothle ukhiphe umyalelo wokuthi umuntu wokugcina ukubona uTimol ephila, uSergeant Jan Rodgrigues kufanele athweswe icala lokubulala nelokufihla ubufakazi.